लेवलबुटरोल बनाम अल्बुटेरोल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
प्रेस कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण कम्पनी, चेकआउट समाचार, कल्याण चेकआउट कम्पनी, समाचार खेलहरु घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> लेवलबुटरोल बनाम अल्बुटेरोल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
लेवलबुटेरोल र अल्बुटेरल दुई औषधिहरू हुन् जुन अस्थमा र क्रॉनिक अवरस्ट्रक्टिभ पल्मोनरी रोग (सीओपीडी) सम्बन्धित ब्राँकोस्पासमको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। दम एक श्वास रोग हो जुन सबै उमेरका मानिसहरूलाई असर गर्दछ। यो घरघराहट, खोकी, सासको कमी, र छातीमा जकड़न द्वारा विशेषता हो। यो अनुमान गरिएको छ दम संयुक्त राज्य अमेरिकामा करीव २ million मिलियन मानिसहरूलाई असर गर्दछ,7लाख बच्चाहरू सहित।
सीओपीडी कहिलेकाँही एम्फाइसेमा भनेर चिनिन्छ, दमसँग समान गुणहरू हुन्छ, तर श्वासनलीमा बाक्लो बलगमको उत्पादन पनि सामिल छ। दमको ठ्याक्क कारण अज्ञात छ, तर सीओपीडी विकसित गर्ने धेरै जसो बिरामीहरूको धूम्रपान वा फेफोको जलनमा दीर्घकालीन प्रदर्शनको इतिहास हुन्छ।
ब्रोन्कोस्पाज्मले दम र सीओपीडी दुबैमा हुने प्रक्रियाको वर्णन गर्दछ जहाँ वायुमार्गले संकुचन गर्दछ, जसबाट हवालाई पार गर्न गाह्रो हुन्छ। यसलाई कहिलेकाँही ब्रोन्कोकोनस्ट्रिक्ट पनि भनिन्छ। लेभालबुटेरल र अल्बुटेरोल दुबैले ब्रोन्कोस्पाज्मको उपचार गर्छन्, तर तिनीहरू फरक तरिकाले काम गर्छन्।
लेवलबुटेरोल र अल्बुटेरोल बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
लेवलबुटेरल एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो जुन एक मध्यम चुनिंदा, छोटो अभिनय गर्ने बीटा-२-रिसेप्टर एगोनिस्ट (SABA) हो। लेभाल्बुटरोल अल्बुटेरल रेसमिक मिश्रणको अधिक सक्रिय R-enantiomer हो। लेवलबुटेरोलले बीटा रिसेप्टर्सहरूलाई उत्तेजित गर्दछ जसको परिणामस्वरूप ब्रोन्कियल र ट्रेकीयल चिल्लो मांसपेशी र अधिक खुला एयरवेमा आराम हुन्छ। लेभालबुटेरल एक मिटर-डोज इनहेलर (एमडीआई) को रूपमा उपलब्ध छ प्रति uation m एमसीजी खुराक प्रति वितरण। यो नेबुलाइजर मेशिनमा प्रयोग गरिने समाधानको रूपमा पनि उपलब्ध छ। यो नेबुलाइजर समाधान ०.1१ मिलिग्राम / m मिलीलीटर, ०..63 मिलीग्राम / m मिलीलीटर, र १.२ mg मिलीग्राम / ml मिलीलीटरको सान्द्रतामा उपलब्ध छ।
अल्बुटेरोल एक पर्चेको औषधि हो जो एक मध्यम चुनिंदा, छोटो-अभिनय बीटा २-रिसेप्टर एगोनिस्ट (SABA) पनि हो। एल्बुटेरल आर-एन्टाइमर्स र एस-एन्टाइओमरहरूको एक रेसिमिक मिश्रण हो जुन आर-एन्टाइमेर अधिक सक्रिय आईसोमर र लेवलब्युटरलमा सक्रिय घटक हो। रेसमिक अल्बुटेरल मौखिक ट्याब्लेटमा तत्काल रिलीज २ मिलीग्राम र mg मिलीग्राम र विस्तारित विमोचन mg मिलीग्राम र mg मिलीग्राममा उपलब्ध छ। Albuterol मौखिक समाधानमा २ मिलीग्राम / m मिलीलीटरको एकाग्रतामा पनि उपलब्ध छ। Albuterol पनि एक मापन-डोज इनहेलरमा आउँदछ 90 ० mcg प्रति कार्यको साथै विभिन्न प्रकारका नेबुलाइजर समाधानहरू।
लेवलबुटेरोल र अल्बुटेरोल बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग मध्यम चुनिंदा छोटो-अभिनय बीटा-२- एगोनिस्ट मध्यम चुनिंदा छोटो-अभिनय बीटा-२- एगोनिस्ट
ब्रान्ड नाम के हो? Xopenex प्रोएयर, प्रोभेन्टिल, भेन्टोलिन, अक्नुब, भोपायर
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मिटर-डोज इनहेलर, नेबुलाइजर समाधान मिटर-डोज इनहेलर, नेबुलाइजर समाधान, मौखिक ट्याबलेटहरू, मौखिक समाधान
मानक खुराक के हो? ०..63 मिलीग्राम नेबुलाइजर मार्फत वा m 45 एमसीजी एमडीआई मार्फत प्रत्येक -6--6 घण्टा २. mg मिलीग्राम नेबुलाइजर मार्फत वा m ० एमसीजी एमडीआई मार्फत प्रत्येक -6--6 घण्टा
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? अस्थायी, छोटो अवधि अस्थायी, छोटो अवधि
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? बच्चाहरू years बर्ष र माथिका, वयस्कहरू शिशुहरू, बच्चाहरू, वयस्कहरू
शर्तहरू लेवलबुटेरोल र अल्बुटेरोल द्वारा उपचार
लेभालबुटेरल र अल्बुटेरोल दुबैले बीटा रिसेप्टर्सहरूलाई उत्प्रेरित गरेर वायुमार्गमा स्नायु मांसपेशीहरूको विश्रामको लागि काम गर्दछन् जसले गर्दा वायुमार्ग खुल्न र कम प्रतिरोधको साथ फोक्सोमा बढी हावा बोक्न अनुमति दिँदछ।
दुबै लेभालब्युरोल र अल्बुटेरल दमको समस्या, ट्रान्जियन्ट ब्रोन्कोस्पासम वा घरघराहट, र सीओपीडी सम्बन्धित ब्रोन्कोस्पासमको उपचारमा एफडीए स्वीकृत हुन्छन्। यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि दुबै औषधि प्रोफेलेक्सिस, वा रोकथामको रूपमा अनुमोदन गरिएको छैन, यी संकेतहरूको लागि। यद्यपि, व्यायाम प्रेरित ब्रोंकोस्पासमको प्रोफेलेक्सिसमा अल्बुटेरोल प्रयोग गर्न अनुमोदित छ। सामान्यतया, व्यायामको कारण ब्रोन्कोस्पास्मको सम्भावना कम गर्न को लागी अनुमानित व्यायाम भन्दा १ minutes मिनेट पहिले अल्बुटेरल प्रशासित हुन्छ। कहिलेकाँही लेवलबुटेरोल पनि यस संकेतका लागि अफ-लेबल प्रयोग गरिन्छ। अफ-लेबलको मतलब ड्रगलाई खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा यो संकेतको लागि प्रयोगको लागि अनुमोदन गरिएको छैन।
निम्न चार्टले यी औषधिहरूको लागि प्राय: जसो ज्ञात प्रयोगहरूको सूची गर्दछ। केवल तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारित गर्न सक्छन् कि यी औषधिहरू तपाईंको अवस्थाको लागि उपयुक्त छन। गम्भीर दमा र सीओपीडी ब्रोन्कोस्पासमको मामिलामा, कृपया नजिकको आपतकालीन विभागमा उपचार खोज्नुहोस्।
स्वास्थ्य सेवा बचत खाता पेशेवरहरु र विपक्ष
सर्त लेवलबुटेरोल अल्बुटेरोल
दम बढ्ने समस्या हो हो
क्षणिक ब्रोन्कोस्पाज्म / एपिसोडिक घरघराहट हो हो
व्यायाम प्रेरित ब्रोंकोस्पासम प्रोफेलेक्सिस अफ-लेबल हो
COPD सम्बन्धित ब्रोन्कोस्पाज्म हो हो
हाइपरक्लेमियाको गहन उपचार अफ-लेबल अफ-लेबल
नवजात श्वास रोगहरूको संयोजन संयोजन हैन अफ-लेबल
के लेभालबुटेरल वा अल्बुटेरोल बढी प्रभावकारी छ?
अस्थमा र सीओपीडी नतीजाको सन्दर्भमा लेभाल्बुटरोल र अल्बुटेरोलको व्यापक तुलना गरिएको छ। २०१ 2015 अध्ययन वयस्कहरूको मूल्यांकन गर्नुहोस् जुन अस्थमा वा सीओपीडी एक्स्सर्बिएशनको साथ अस्पतालमा भर्ती भएकाहरू जसलाई या त लेभालब्युटरल वा अल्बुटेरोल द्वारा उपचार गरिएको थियो। यस क्लिनिकल परीक्षणको नतीजाले पत्ता लगाए कि क्लिनिकल नतिजा ती दुई औषधिहरू बीच समान थिए र दुबै ब्रोन्कोस्पासमको लक्षणहरूलाई कम गर्न प्रभावकारी थिए। यद्यपि, लेभालब्युरोल उपचारको लागत अलब्युटेरल उपचारको लागत भन्दा धेरै महँगो थियो र लेभालबुरोल समूहका बिरामीहरूलाई अल्बुटेरोल समूहका बिरामीहरूको तुलनामा लामो समयसम्म अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। लामो अस्पताल बस्दा पनि हस्तक्षेपको समग्र लागत बढाउँदछ।
TO मेटा-विश्लेषण र व्यवस्थित समीक्षा सात विभिन्न परीक्षणहरूको, १,6०० भन्दा बढी बिरामीहरू सहित, लेभलब्युटरललाई तीव्र दमको रोगीमा अल्बुटेरोलसँग तुलना गर्ने काम गरियो। यस अध्ययनले औषधिहरू बीच कुनै खास फरक पाइन जब सांस्कृतिक दरहरू, अक्सिजन संतृप्ति, र फोक्सोको मात्रामा परिवर्तन जस्ता क्लिनिकल परिणामहरूको तुलना गर्दा। फोक्सोको खण्ड कहिलेकाँही चिकित्सा साहित्यमा जबरजस्ती एक्स्प्रेरी भोल्युम, वा FEV1 को रूपमा चिनिन्छ। यो अध्ययनले अस्थमाको उपचारमा अल्बुटेरोलको तुलनामा लेभालब्युटरल छनौट गर्न समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
दुबै औषधीहरू प्रभावकारी भए पनि सल्लाहकारहरूले लेभालब्युटेरोलको श्रेष्ठताको प्रमाणको कमीको कमी र कुन औषधि लिने भनेर निर्णय गर्दा उच्च मूल्यमा तौल गर्न सक्छन्। लेभाल्बुटरोल चार वर्ष र सो भन्दा बढि बाल रोगीहरूमा मात्र अनुमोदित हुन्छ, त्यसकारण अल्बुटेरोलले कलि बाल्य जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिइनेछ। तपाईको डाक्टरले तपाईको अवस्थाको लागि सहि औषधि छनौट गर्न सक्दछ।
कभरेज र लेवलबुटेरोल बनाम अल्बुटेरोलको लागत तुलना
लेवलबुटेरोल एक औषधि हो जुन सामान्यतया वाणिज्य बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छ। यो या त एक मेडिकेयर भाग डी वा भाग बी योजना द्वारा कभर हुन सक्छ निदानमा निर्भर गर्दछ। कभरेज बिना, लेभालबुटेरलले तपाईंलाई $ १ than० भन्दा बढी खर्च गर्न सक्दछ। एकलकेयर कूपन जेनेरिक लेवलबुटेरोलको लागि मूल्य घटाउन $ 30 सम्म सहभागी फार्मेसीहरूमा।
Albuterol या त एक मेडिकेयर भाग डी वा भाग B योजना द्वारा कभर हुन सक्छ निदानमा निर्भर गर्दछ। यो पनि सामान्यतया व्यावसायिक बीमा योजनाहरु द्वारा कवर गरिएको छ। Albuterol कभरेज बिना $ 40 को लागी खर्च हुन सक्छ, तर SingleCare बाट एक कूपन संग, तपाईं सामान्य फार्म प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ $ १० भन्दा कममा सहभागी फार्मेसीमा।
एक फ्रीस्टाइल libre लागत कति छ?
सामान्यतया चिकित्सा भाग डी द्वारा कभर? निदानमा निर्भर निदानमा निर्भर
मानक खुराक २,, ०..63 मिलीग्राम / m मि.लि. २,, २. mg मिलीग्राम / m मि.लि.
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे योजनामा ​​निर्भर योजनामा ​​निर्भर
एकलकेयर लागत $ 30- $ १ .० $ १०- $ २०
लेवलबुटेरोल बनाम अल्बुटेरोलको साझा साइड इफेक्टहरू
जबकि लेवलबुटेरोल र अल्बुटेरल बीटा रिसेप्टर्सको लागि वायुमार्गको सहज चिकनी मांसपेशीमा मध्यम छनौट गर्दछ, त्यहाँ अझै पनि हृदय बीटा-रिसेप्टर उत्तेजना हुन सक्छ हृदयको दर वृद्धि गर्न, टाकीकार्डिया भनेर चिनिन्छ। दुबै लेभालब्युरोल र अल्बुटेरोलले घबराहट र कम्पन पैदा गर्दछ। माइग्रेन र चक्करकोटी लेभलब्युटरलको साथ नोट गरियो, तर अल्बुटेरोलको होईन।
यो सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरूको एक विस्तृत सूची हुने उद्देश्यले गरिएको छैन। साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि कृपया तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
टाचिकार्डिया हो २.7% हो २.7%
माइग्रेन हो २.7% हैन n / a
Dyspepsia हो २.7% हो १.4%
खुट्टा ऐंठन हो २.7% हो १.4%
चक्कर हो २.7% हैन n / a
उच्च रक्तचाप हैन n /aहो २.7%
नर्भस हो .6 ..6% हो .1.१%
कम्पन हो 8.8% हो २.7%
चिन्ता हो २.7% हैन n / a
बढेको खोकी हो 1.१% हो २.7%
भाइरल संक्रमण हो १२..3% हो १२.२%
नासिकाशोथ हो २.7% हो 8.8%
साइनसाइटिस हो १.4% हो २.4%
टर्बिनेट इडेमा हो १.4% हैन n / a
स्रोत: लेवलबुटेरोल ( डेलीमेड ) अल्बुटेरोल ( डेलीमेड )
लेवलबुटेरोल बनाम अल्बुटेरोलको ड्रग अन्तरक्रिया
उनीहरूको रासायनिक समानताका कारण, लेभालबुरोल र अल्बुटेरोलको लागि सम्भावित ड्रग अन्तर्क्रिया धेरै समान छ। एजीथ्रोमाइसिन, एक धेरै सामान्य एन्टिबायोटिक जो प्रायः माथिल्लो श्वासप्रणाली संक्रमणमा प्रयोग गरिन्छ, लेभलबुटरल वा अल्बटेरोलसँग सम्भव भएमा टाढा रहनु पर्छ। अजिथ्रोमाइसिन, जब छोटो-अभिनय बीटा-एगोनिस्टहरूसँग प्रशासित हुन्छ, QT विस्तारको जोखिम बढी हुन्छ, कार्डियक एरिथमियाको एक प्रकार। यदि यो संयोजन प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने, बिरामीको हृदय समारोहलाई नजिकबाट निरीक्षण गर्नुपर्दछ। यो नै औषधी एकै समयमा प्रशासन गर्नु अघि हृदय समारोहको आधारभूत प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
बीटा ब्लकरहरू, प्राय जसो मुटुको दर र रक्तचाप नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ, बिटा-एगोनिस्टको विपरीत कार्य गर्दछ। उनीहरूका कार्यहरूले एक अर्कालाई विरोध गर्नेछन्। यदि बिरामी दुबै बीटा अवरोधक र बीटा-एगोनिस्ट हुनै पर्छ, एक हृदयिय विकल्प बिटा ब्लकर प्रयोग गर्न रुचाइएको छ। कार्डियोजेक्टिभ बीटा ब्लकरहरूको उदाहरणहरूमा एटेनोलोल र मेटोप्रोलोल अन्य हुन्छन्।
यो सम्भावित ड्रग अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची होइन। सम्भावित औषधी अन्तर्क्रियाको पूर्ण समझको लागि कृपया एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवरको चिकित्सा सल्लाह लिनुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग लेवलबुटेरोल अल्बुटेरोल
क्याफिन Xanthine व्युत्पन्न / CNS उत्तेजक हो हो
स्यूडोफेड्रिन डिकन्जेन्ट्स हो हो
सोतालोल बीटा ब्लकरहरू (बीटा विरोधी) हो हो
Dronedarone एन्टि-एरिथिमिक्स हो हो
सर्टलाइन चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू (एसएसआरआई) हो हो
क्लेरिथ्रोमाइसिन एन्टिबायोटिक हो हो
केटोकोनाजोल एन्टिफंगलहरू हो हो
लेवलबुटेरोल र अल्बुटेरोलको चेतावनी
लेभाल्बुटरोल र अल्बुटेरोलले विरोधाभासपूर्ण ब्रोन्कोस्पाज्म हुन सक्छ, यस्तो अवस्था जहाँ बिरामीको ब्रोन्कोस्पाज्म वा घरघर वास्तवमा सुधारको सट्टा खराब हुन्छ। यदि यो हुन्छ भने, उपचार तुरुन्त रोक्नु पर्छ र नयाँ उपचार सुरू गर्नुपर्दछ।
दमको अस्थिरता घण्टा, दिन, वा अधिक अवधिमा हुन सक्छ। यदि दमको बिरामीलाई दमको लक्षण नियन्त्रण गर्न ब्रोन्कोडाइलेटरको बढ्दो मात्रा चाहिन्छ भने, यो अस्थिरता रहेको संकेत हुन सक्छ। यसको अनुभव गर्ने बिरामीहरूलाई एन्टी-इन्फ्लेमेटरी उपचारहरू आवश्यक पर्दछ जस्तै कोर्टीकोस्टेरोइड वा उनीहरूको मर्मतसम्भार औषधि विधिमा परिवर्तन।
लेभाल्बुटरोल र अल्बुटेरोल, विशेष गरी सिफारिस गरिएको रकम भन्दा माथि डोजमा गम्भीर हृदय असरहरू हुन सक्छ जस्तै मुटुको दर र रक्तचाप बढेको। केही गम्भीर मामिलाहरूमा, हृदय गिरफ्तार भएको छ। तपाईको डाक्टरले सिफारिस गरेको डोज कहिल्यै नपार्नुहोस्।
कम सीरम पोटेशियम स्तर, वा हाइपोकलेमिया, लेभालब्युटरोल र अल्बुटेरोलको साथ अवलोकन गरिएको छ। यो इंट्रासेलुलर शन्टिंगको कारण हुन सक्छ। जबकि यी औषधि कहिलेकाँही लेबल अफ-लेबल प्रयोग गरी पोटेशियमको स्तर कम गर्न प्रयोग गरिन्छ, यो प्रभाव अनुगमन गरिनु पर्छ।
मलाई कसरी थाहा छ यदि म ल्याक्टोज असहिष्णु छु?
लेवलबुटेरोल बनाम अल्बुटेरोलको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
लेवलबुटेरोल भनेको के हो?
लेवलबुटेरोल एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो जुन एक छोटो अभिनय गर्ने बीटा-एगोनिस्ट हो, ब्रोन्कोडाइलेटर पनि भनिन्छ। यो अस्थमा र सीओपीडी सम्बन्धित ब्रोन्कोस्पासमको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। व्यायाम-प्रेरित ब्रोंकोस्पास्म रोक्न मद्दतको लागि यसलाई अफ-लेबलको पनि प्रयोग गरिन्छ। यो एक मिटर-डोज इनहेलरको रूपमा उपलब्ध छ साथै समाधानहरू नेबुलाइजरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अल्बुटेरोल भनेको के हो?
Albuterol एक पर्चेको औषधि पनि हो जुन छोटो अभिनय गर्ने बीटा-एगोनिस्ट हो। यो ब्रोन्कोडाइलेटरको रूपमा पनि चिनिन्छ र दम र सीओपीडीसँग सम्बन्धित ब्रोन्कोस्पासमको उपचार गर्नका साथै व्यायाम-प्रेरित ब्रोंकोस्पास्म रोक्न पनि प्रयोग गरिन्छ। यो मौखिक ट्याब्लेटहरू, मौखिक समाधानहरू, मिटर-डोज इनहेलरहरू, र नेबुलाइजरमा प्रयोग गरिने समाधानहरू सहित बिभिन्न प्रकारहरूमा उपलब्ध छ।
के लेभालबुटेरल र अल्बुटेरोल एकै छन्?
लेभालबुटेरल र अल्बुटेरोल रासायनिक रूपमा समान छन्, तर ती वास्तवमा उस्तै छैनन्। Albuterol दुई रासायनिक enantiomers, R-albuterol र S-albuterol को एक रेसिमिक मिश्रण हो। यसलाई कहिलेकाँही रेसमिक अल्बुटेरोल पनि भनिन्छ। लेवलबुटेरोल केवल आर-अल्बुटेरोलबाट बनेको छ, दुई यौगिकहरूको अधिक सक्रिय।
के लेभालबुटेरल वा एल्बुटेरोल राम्रो छ?
पूर्वव्यापी तुलना अध्ययन समग्रले देखायो कि लेवलबुटेरोल र अल्बुटेरोलको समान नैदानिक ​​परिणामहरू छन्। प्रिस्क्रिप्टरहरूले सुविधाहरूमा यस्तो लागत र सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरू विचार गर्न सक्दछन् जब एक अर्कोमा चयन गर्नुहुन्छ।
के म गर्भवती हुँदा लेभालबुटेरल वा एल्बुटेरोल प्रयोग गर्न सक्छु?
लेभालबुटेरल र एल्बुटेरोल दुबै एफडीएद्वारा गर्भावस्था कोटि सी मानिन्छ। यसको मतलब गर्भावस्थामा सुरक्षा देखाउन कुनै राम्रो नैदानिक ​​अध्ययनहरू छैनन्। यी औषधिहरू मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ जब लाभ स्पष्ट रूपमा जोखिम को पछाडि। यी अवस्थाहरूमा, गर्भावस्थामा यसको प्रयोगमा अधिक ऐतिहासिक डाटाको उपस्थितिको कारणले गर्दा अल्बटेरोल रुचाइन्छ।
के म लेवलबुटेरोल वा अल्बुटेरोल रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
अल्बुटेरोल र रक्सीको साथ कुनै प्रत्यक्ष contraindication छैन। यद्यपि, रक्सीले श्वासप्रश्वासको दरलाई सुस्त बनाउन र पल्मोनरी फंक्शनलाई असर गर्न सक्छ, जुन ब्रोन्कोस्पाज्म उपचारको लागि प्रतिकारात्मक छ
के लेभालबुटेरल एक बचाव इनहेलर हो?
हो, लेभाल्बुटरोल एचएफए एक उद्धार इनहेलर हो जुन सीओपीडीको कारण तीव्र दमाको समस्या वा ब्रोन्कोस्पस्म्सको उपचारमा प्रयोगको लागि संकेत गरिएको छ।
के लेभालबुटेरल एक स्टेरोइड हो?
लेवलबुटेरोल एक स्टेरोइड वा एन्टी-इन्फ्लेमेटरी होईन र स्टेरॉइडको ठाउँमा प्रयोग गर्नु हुँदैन जब स्टेरॉइड प्रयोग जनाईन्छ, जस्तै दम अस्थिरतामा।
लेवलबुटेरोल कति लामो हुन्छ?
औसतमा, लेभाल्बुटरोलको एक खुराकको प्रभाव पाँच देखि छ घण्टा लामो हुन सक्छ। लेभालबुटेरल प्रशासन पछि १ 15 मिनेट पछि काम गर्न थाल्छ।
प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरापी को लागत कति छ?